Taliska bilayska Puntland oo sheegay in ay ka walwalsan yihiin kororka dadka muhaajiriinta ah ee soo galaya Puntland. – Radio Daljir
Garowe, July 26 – Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska, nabad-galyada , asluubta iyo dhaqan-celinta ee dawladda Puntland Muxiyadiin Axmed Muuse, ayaa maanta shaaca ka qaaday in dawladda Puntland khaati ay ka taagan tahay muhaajiriinta uga soo tillaabaya xudduudaha ay la-wadaagto dhinacyada la dariska ah.
Taliyaha ayaa hadalkaan ka jeediyay kulan looga hadlaayay xalinta-dhibaatooyinka barakacayaasha, Tahriibta iyo dadka magan-galyo doonka ah oo ay soo qaban qaabisay hay?adda guddiga qaxootiga dalka Denmark ee DRC, kaas oo maantaba kusoo gabagaboobay magaalada Garoowe..
Mudane Muxiyadiin Axmed Muuse, ayaa sheegay in dawladdu ay qaaday dadaallo gacanta lagu soo dhigay boqolaal kamid ah dadkaasi haatanna ay ku jiraan xabsiyada ku yaalla Puntland, balse uu waxaa meesha ka saaray illaa waqtigaan in aysan jirin isbaddal yaraansho ah oo dadkaasi laga dareemayo.
Arintaan ayaa taliye ku-xigeenka ciidanka booliska iyo asluubta Puntland ku sheegay in ay tahay mid laga soo shaqeeyey laguna doonayo khal-khal-galinta ammaanka Puntland.
Taliye ku-xigeenka ayaa ugu dambayn sheegay in arrintaan wax looga qaban karo oo kaliya adkaynta baraha koontaroollada ah ee laga soo galo magaalooyinka Puntland, baaritaanna lagu sameeyo qofkasta oo gudaha usoo galaya deegaannada Puntland.
Ma ahan markii ugu horraysay oo Puntland walaac ay ka muujiso qul-qulka dad iskugu jira Qaxooti oo badankoodu ka imaanaya Ethiopia iyo barakacayaasha oo sannadba sannadka ka dambeeya sii kordha kuwaasi oo ka soo baxsanaya dhibaatooyinka nabad-galyo xumo eek a jirta koonfurta Soomaaliya.
C/ Wali Maxamed Sheikh,
Radio Daljir Gaoowe.